what, when, why: साँचो माया
यो कथा साँचो माया गर्ने एक प्रेमी र प्रेमीकाको हो । जसको नाम सागर र सपना थियो । सागर र सपना एक अर्कालाई असाध्य माया गर्दथे । सागर र सपनाको पहिलो पटक भेट क्याम्पसमा भएको थियो । जहाँ सागर आफ्नो अगाडीको अध्ययन गर्न आएको थियो । सपना सागर संग केहि बोल्न खोज्छ तर सागर भने केहि नबोली हिड्छ र सपना भने उसलाई हेरि रहन्छिन् ।
सपना करोडपति वावु की एक्ली छोरी हुन्छे तर उसमा धनको कुनै घमण्ड हुदैन । उ अरु केटीहरु जस्तै सरल र चञ्चल स्वभावकी थिईन । सपनाले पहिलो भेटमा नै सागरलाई मन पराउन थाल्छिन् । सागर भने गरिब आमाको एक्लो छोरो थियो । उ शान्त स्वभावको थियो त्यसैले होला सपना सागर भने पछि भुतुक्कै हुन्थिन । तर सागर भने सपनासंग टाढिन खोज्थ्यो । क्याम्पसमा सागर नयाँ थियो त्यसमाथि पनि गाँ उबाट आएको उसलाई सबैले गिज्याउथ्यो तर सपना मात्र थिईन की उसलाई केहि भन्दिन थिईन, सागरकै पक्षमा बोल्थीन । जसले गर्दा सागर र सपनामा घनिष्ट मित्रता हुन पुग्यो । विस्तार विस्तारै उनिहरुको मित्रताले प्रेमको रुप लिन थाल्यो र मित्रता प्रेममा परिणत भयो । सागर र सपना एक अर्कालाई एक छिन पनि नदेख्दा पानी बिनाको माछा छटपटे झै छटपटिन्थे । संगै हिडेने बस्ने गर्न थाले । उनिहरुलाई एक अर्का बिना वाँच्न मुस्किल भयो । उनीहरुको यस्तो गाढा र साँचो माया देखेर साथीहरु ईष्र्या गर्थे र भन्थे सागर र सपना जस्तो एक अर्कालाई साँचो माया गर्ने प्रेमी हामीलाई पनि पाए हुन्थ्यो ।
सागर र सपनाको प्रेम कहानी चलेको एक वर्ष भई सकेको थियो कि अचानक सागरको हातमा एउटा पत्र पर्छ, जसमा लेखिएको थियो सागर तेरो आमा साह्रै विरामी छ । तँ जसरी पनि घर आइज । पत्र पढ्नासाथ सागर गाँउ फर्कने तयारी गर्छ र घर फर्कन्छ । गाँउ फर्कने बेलामा सागरको सपनासंग भेट हुन पाउदैन । उता सागर घर पुग्दा आमाले प्राण त्यागि सकेकी हुन्छीन । यता सपना सागरले केही नभनी यसरी हराएकोले उ पानी बिनाको माछी झै छटपटि रहेकी हुन्छिन । त्यसैबेला उसको हातमा एउटा पत्र पर्छ, जुन पत्र सागरले सपनालाई पठाएको हुन्छ । पत्रमा सागरले आफु एक्कासी हराउनु परेको कारण र आफु आउन अझ एक महिना लाग्ने कुरा उल्लेख गरेको थियो । सपनालाई सागर बिना एक दिन त काट्न मुस्किल भएको बेला एक महिना सागरको अनुपस्थितिमा आफ्नो जीवन विताउनु पर्दा दश वर्ष बिताउनु परेझै लाग्न थाल्यो । विस्तार–विस्तारै सपनाको सपनाको पर्खाईको घढी पनि सिद्धयो ।
यता सागर आफ्नो सम्पूर्ण काम सिध्याएर सपनालाई भेट्ने खुशीले रम्दै शहर आउछ । शहरमा आउनासाथै सपनाको विषयमा साथीहरुसंग कुरा गर्छ । सपनाले त आजै अरुनै केटासंग विवाह गरिन भन्ने समाचार उसको साथीहरुले सुनाउछ । यस्तो खबर सुन्नासाथ उ हागाबाट खसे जस्तो हुन्छ । संगै वाच्ने, संगै मर्ने खाएको कसम यति छिट्टै तोडेर जान सक्दैन भनि उ त्यहाबाट सपनाको घर तर्फ जान्छ । जाँदा–जाँदा बाटोमा उसले एउटी केटी र केटा वेहुली र वेहुलाको भेषमा आफुतिर आएको देख्छ, अलि नजिक आएपछि उसले त्यस केटीलाई चिन्छ । त्यो केटी अरु कोहि नभई आफैले चाहेको सपनापो रै’छ । आफु अगाडी आफुले प्राण भन्दा बढी माया गरेको आफ्नो प्रेमिकाको त्यस्तो रुप देखे पछि उसलाई बाँच्नुको कुनै अर्थ रहेन र उ नजिकको पोखरीमा हाम फाल्छ । त्यसपछि सपना कराउछिन, पोखरीमा मान्छे डुब्यो बचाउ.....बचाउ.......बचाउ.... । केहि बेर पछि केटाहरुले चाल पाई सागरलाई खोलाबाट बाहिर निकाल्छ । सपनाको आँखाभरी आँसु आउछ । उनी रुदै भन्छिन तिमीले यो के गरेको सागर ? सागरले जवाफ दिन्छ, तिमी किन रोएकी ? तिमी त आज खुशी हुनुपर्ने हो किनकी तिम्रो त आज विवाह भएको छ । म तिम्रो को हुँ र ? सपना तर्सिन्छीन । उसले सागरलाई सम्झउछे । सागर मैले कैसैसंग विवाह गरेको छैन । यो त मैले नाटक गरेकी हुँ , तिम्रो माया जाच्नकोलागि हामी साथीहरु मिलेर नाटक गरेको । मलाई के थाहा ?, कि तिमी मलाई आफ्नो प्राण भन्दा पनि बढी माया गर्छौ भनेर नत्र म आफ्नो प्राणको परिक्षा लिने थिईन । सपनाको यस्तो भनाई सुनी सागरले सपनालाई भन्छ, अब उप्रान्त मसंग यस्तो नाटक नगर । नत्र तिम्रो यो प्राणले यो संसार छाड्ने छ । यति भन्न नपाउदै सपनाले सागरको मुख थुन्दिनछिन । त्यस पछि दुवै जना मिली आ–आफ्नो कोठा फर्कन्छ ।
सागर र सपनाको सम्पूर्ण प्रेम कहानी सपनाको बुवाले चाल पाउछ र सपनाको विहेको कुराकानी अन्तै चलाउन थाल्छ । सपनाले आफ्नो बुवालाई आफुले सागरलाई मन पराएको र उसैसंग विवाह गर्ने निधो गरको कुरा सुनाउछिन । तर सपनाको बुवाले यी दुवै माया गर्ने प्रेमीको बीचमा धनी र गरिबको ठूलो पर्खाल खडा गरिदिन्छन । बुवाको अगाडी केही जोड नचले पछि सपनाले सागरलाई भागेर जाने आग्रह गर्छिन तर सागरले भने मान्दैन । उसले सपनालाई सम्झाउछ, हेर हामी एक अर्कालाई साँचो माया गर्छौ किन डराउने ? म तिमीलाई तिम्रो बुवासंग मागेर विवाह गर्छु । तिमी आफ्नो घर जाउ भनि सपनालई घर पठाउछ । यता सपना घर पुग्दा उसको विवाहको कुरा अन्तै छिनोफानो गरिसकेको हुन्छ र दुई दिन पछि उसको विवाहको मिति पनि तोकिन्छ ।
सागरले सपनाको विवाहको कुरा छिनियो भन्ने चाल पाएपछि उ सपनाको घर जान्छ उसको हात माग्न । तर त्यहाबाट अपमानित भई फर्कनु पर्छ, आफ्नो अगाडी आफ्नो प्रेमीको अपमान भएको र उ बीना बाँच्नु पर्ने हुदा उ बीना बाँच्नु भन्दा मर्नु उचित ठानी आफ्नो कोठमा गई सागरको फोटो हेरी मलाई माफ गरि देउ सागर म यो जुनीमा तिम्रो हुन सकिन म तिमीलाई छाडेर यो संसारबाट जादैछु । म तिम्रो वाहेक अरु कसैको भई बाँच्न चाहान्न भनि विष सेवन गर्छिन । उसले विष सेवन गरेको आमा–बुवाले चाल पाई सपनालाई अस्पताल पु¥याउछन । उता सागर सपना बीना विछोडी बाँच्नु भन्दा मर्नु उचित भनि उ पनि मर्ने निष्कर्षमा पुगि नजीकको औषधी पसलमा गई किरा मार्ने औषधी लि फर्कीदा सागरले सपना विष सेवनबाट घाईते भई अस्पतालमा लगेकोछ भन्ने चाल पाउछ । त्यसपछि उ स्वाँ –स्वाँ र फ्वाँ –फ्वाँ गर्दै अस्पतालतीर दौडन्छ । अस्पताल पुगेपछि होश नआए सम्म सपनाको केहि भन्न सकिन्न भन्ने डाक्टरबाट सुन्छ र सपनाको बेडमा गई भक्कानो फुट्ने गरि रुन्छ सपना तिमीले मलाई एक्लै छाडेर जान सक्दैनौ भन्दै रुदै गर्छ । सपनालाई होश नआएको देखी सपना म बाट विछोडीने पिडाले आत्महत्या गरिन् म किन बाँच्ने भनि हातमा रहेको किराको औषधी पिउछ जसबाट सागरको मृत्यु हुन्छ ।
सागरले प्राण त्यागेको केहि वेरपिछ सपनालाई होश आउछ, होशमा आउनासाथ उसले सागरलाई नै खोज्छीन जब सागरलाई आफु समक्ष प्राण त्यगेको उनले देख्छिन , अनि उनी पनि सागर भनि जोडले कराई अंकमाल गर्छीन र आफ्नो प्राण त्याग्छिन । यसरी साँचो माया गर्ने प्रेमी र प्रेमीका बाचुन्जेलसम्म संगै रहे र मर्ने बेलामा पनि संगै मरे । एक अर्का विना बाँच्नु भन्दा संगै एक अर्काको साथ रहने गरि प्राण त्यागे ।
A common love story. old wine in new bottle.
simple nepali lovestory film.....not more than that
euta kura k bhane ni maile jati pani love story padhe sabaima death bhayeko bahek khi lekhiyeko hudain kin kasile pani milan bhayeko kura lai jod didain so that is bad . so I dont like this type story .
I like it this story really true love
Sunta Basnet said...
Ramro katha rahechha. Niaki ramrlagyo. mialn ra bichod ko padha-padha waak vayeko thiye yesma naya pan paye j hos sanagi marne sangai bachne bachan ma badhiyeka yi premi premikale aafna bachha pura gare. bachda pani sagai ra marda pani saath agaie kya vagyemani. i hope tapaiko aru pani ramro katha haru parkasna hunchha hola
very nice,but sagar ra sapana le dhani ra garib ko khadal purera milan hune idea diyako bhaya jhan ramro hune thiyo..